တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ထိုင်းနိုင်ငံသံ အမတ်ကြီး H.E. Mrs. Suphatra Srimaitreephithak အားလက်ခံ တွေ့ဆုံ » ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ထိုင်းနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mrs. Suphatra Srimaitreephithak အား ယနေ့ ညနေပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ ဘုရင့်နောင်ရိပ်သာဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံ သည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး အောင်စိုး၊ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး စိုးထွဋ်နှင့် တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ တက်ရောက်ကြပြီး မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ထိုင်းနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး နှင့်အတူ စစ်သံမှူး Colonel Apichart Choopavang ၊ ရေတပ်စစ်သံမှူး၊ လေတပ် စစ်သံမှူးနှင့် သံရုံးမှတာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ကြသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် နှစ်နိုင်ငံနှင့်တပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြား ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ အကောင်းဆုံးအခြေအနေတွင်ရောက်ရှိနေမှု၊ နယ်စပ်ဒေသ တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအန္တရာယ်တားဆီး ကာကွယ်နှိမ်နင်းရေးတို့အတွက် TBC ၊ RBC နှင့် HLC ကဲ့သို့သော နှစ်နိုင်ငံအဆင့် အလိုက် အစည်းအဝေးများနှစ်စဉ် ကျင်းပပြုလုပ်ပြီးဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် အခြေအနေ များ၊ တပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် အခြေအနေများ၊ ထိုင်းနိုင်ငံမှ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများပိုမိုတိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်နိုင်မည့် အခြေအနေများအား ရင်းနှီးပွင့် လင်းစွာအမြင်ချင်းဖလှယ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
နပွေညျတျော၊ မေ – ၂၃
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျသညျ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ ထိုငျးနိုငျငံ သံအမတျကွီး H.E. Mrs. Suphatra Srimaitreephithak အား ယနေ့ ညနပေိုငျးတှငျ နပွေညျတျောရှိ ဘုရငျ့နောငျရိပျသာဧညျ့ခနျးမဆောငျ၌ လကျခံတှဆေုံ့ သညျ။
အဆိုပါတှဆေုံ့ပှဲသို့ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့အတူ ကာကှယျရေး ဦးစီးခြုပျရုံး(ကွညျး)မှ ဒုတိယဗိုလျခြုပျကွီး အောငျစိုး၊ ဒုတိယဗိုလျခြုပျကွီး စိုးထှဋျနှငျ့ တပျမတျောအရာရှိကွီးမြား တကျရောကျကွပွီး မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ ထိုငျးနိုငျငံသံအမတျကွီး နှငျ့အတူ စဈသံမှူး Colonel Apichart Choopavang ၊ ရတေပျစဈသံမှူး၊ လတေပျ စဈသံမှူးနှငျ့ သံရုံးမှတာဝနျရှိသူမြားတကျရောကျကွသညျ။
ထိုသို့တှဆေုံ့ရာတှငျ နှဈနိုငျငံနှငျ့တပျမတျောနှဈရပျအကွား ခဈြကွညျရငျးနှီးမှုနှငျ့ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှုမြား အကောငျးဆုံးအခွအေနတှေငျရောကျရှိနမှေု၊ နယျစပျဒသေ တညျငွိမျအေးခမျြးရေး၊ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေး နှငျ့မူးယဈဆေးဝါးအန်တရာယျတားဆီး ကာကှယျနှိမျနငျးရေးတို့အတှကျ TBC ၊ RBC နှငျ့ HLC ကဲ့သို့သော နှဈနိုငျငံအဆငျ့ အလိုကျ အစညျးအဝေးမြားနှဈစဉျ ကငျြးပပွုလုပျပွီးဆောငျရှကျလကျြရှိသညျ့ အခွအေနေ မြား၊ တပျမတျောနှဈရပျအကွားပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှုမြား တိုးမွှငျ့ဆောငျရှကျလကျြရှိသညျ့ အခွအေနမြေား၊ ထိုငျးနိုငျငံမှ မွနျမာနိုငျငံတှငျ ရငျးနှီးမွှုပျနှံမှုမြားပိုမိုတိုးမွှငျ့ဆောငျရှကျနိုငျမညျ့ အခွအေနမြေားအား ရငျးနှီးပှငျ့ လငျးစှာအမွငျခငျြးဖလှယျဆှေးနှေးခဲ့ကွသညျ။